चिकित्सा उपयोग निर्माता र कारखाना को लागी सर्वश्रेष्ठ डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क | DSC
गैर बुना कपडा बाधा थोप्ला धुलो को पहिलो तह।
मध्य पिघल-उडाएको तह पिघल-उडाएको कपडा फिल्टर ठीक कण को ​​दोस्रो तह।
गैर बुनेको कपडा को भित्री तह exhaled गर्मी, छाला मैत्री र आरामदायक अवशोषित।
चिकित्सा कर्मचारी वा सम्बन्धित कर्मचारीहरु को लागी आधारभूत सुरक्षा, साथ साथै बाधा वा रगत को सुरक्षा, शरीर को तरल पदार्थ र आक्रामक अपरेशनहरु को दौरान स्प्याटर।
1. पिघल उडाएको कपडा चयन गर्नुहोस्
२. फिल्टरिंग को तीन तहहरु
3. आवेदन को दायरा
मेडिकल सर्जिकल मास्क सामान्यतया मेडिकल बाहिर बिरामी क्लिनिक, प्रयोगशालाहरु र अपरेटि rooms कोठा को रूप मा उच्च मांग वातावरण मा प्रयोग गरीन्छ। ती काम गर्दा मेडिकल स्टाफ द्वारा लगाईन्छ। सुरक्षा कारक अपेक्षाकृत उच्च छ, र ब्याक्टेरिया र भाइरस को प्रतिरोध बलियो छ। सर्जिकल मास्क को उपयोग इन्फ्लुएन्जा बाट बच्न को लागी पनि गर्न सकिन्छ।
मेडिकल मास्क को आवेदन को क्षेत्र:
चिकित्सा मास्क को सबै प्रकार को मापदण्ड र महत्वपूर्ण प्राविधिक संकेतकहरु को अनुसार, चिकित्सा सुरक्षात्मक मास्क चिकित्सा कर्मचारीहरु र सुरक्षा को एक उच्च स्तर संग वायुजनित श्वसन संक्रमण को बिरुद्ध सम्बन्धित कर्मचारीहरु को सुरक्षा को लागी उपयुक्त छ। मेडिकल सर्जिकल मास्क चिकित्सा कर्मचारी वा सम्बन्धित कर्मचारीहरु को आधारभूत सुरक्षा को लागी उपयुक्त छ, साथ साथै आक्रामक अपरेशनहरु को दौरान रगत, शरीर को तरल पदार्थ र छर्रा को प्रसार को बिरुद्ध सुरक्षा को लागी; रोगजनक सूक्ष्मजीवहरु मा साधारण चिकित्सा मास्क को सुरक्षात्मक प्रभाव सटीक छैन। तिनीहरू सामान्य वातावरण मा डिस्पोजेबल स्वास्थ्य हेरविचार को लागी, वा बाधा वा पराग को रूप मा रोगजनक सूक्ष्मजीवहरु को अलावा अन्य कणहरु को बिरुद्ध सुरक्षा को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उपयोग को विधि
● सावधानीपूर्वक मुख र नाकलाई मास्कले छोप्नुहोस् र अनुहार र मास्कको बिचमा ठाउँ कम गर्न उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा बाँध्नुहोस्।
Use प्रयोगमा हुँदा मास्क नछोड्नुहोस्-साबुन र पानीले हात धुनुहोस् वा प्रयोग गरिएको मास्क छोए पछि अल्कोहल आधारित ह्यान्ड स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, उदाहरण को लागी, यसलाई हटाउन वा धुनु।
The मास्क एक नयाँ सफा र सुक्खा मास्क संग बदली पछि यो नम वा नम बन्छ।
Disp डिस्पोजेबल मास्क पुन: प्रयोग नगर्नुहोस्। डिस्पोजेबल मास्क प्रत्येक प्रयोग पछि त्याग्नु पर्छ र हटाउने पछि तुरुन्तै डिस्पोजल।
● जबकि त्यहाँ मानक चिकित्सा मास्क (जस्तै कपास मास्क, headscarves, कागज मास्क, नाक र मुख ढाक्ने कपडा) को लागी अन्य विकल्पहरु छन्, त्यहाँ त्यस्ता सामग्री को प्रभावकारिता को बारे मा जानकारी को अभाव छ।
Such यदि त्यस्ता वैकल्पिक ढालहरु प्रयोग गरीन्छन्, ती एक पटक मात्र प्रयोग गरिनु पर्दछ, वा यदि कपास मास्क प्रयोग गरीन्छ, उनीहरुलाई प्रत्येक प्रयोग पछि राम्रो तरिकाले सफा गर्नु पर्छ (जस्तै कोठाको तापक्रम मा एक घर डिटर्जेंट संग)। यो रोगी को हेरचाह पछि तुरुन्तै हटाउनु पर्छ। मास्क हटाए पछि तुरुन्तै हात धुनुहोस्।
अघिल्लो: चिकित्सा सुरक्षात्मक मास्क Kn95
अर्को: 75% अल्कोहल कीटाणुनाशक
ह्यान्ड स्यानीटाइजर जेल
ZL-H007 २ व्यक्ति धुने बेसिन
पोर्टल कलर डोप्लर अल्ट्रासाउन्ड (K2)